प्रदेशकै सवैभन्दा बढी विकास निर्माण मेरो क्षेत्रमा भएको छ : प्रदेस सभा सदस्य खड्का – Dudhauli News
असाेज १४ बुधवार
प्रदेश सभाको काम र औचित्य माथि जनताले प्रश्न गरी रहेका छन । तपाई के भन्नु हून्छ ?
तपाई प्रदेश सभा सदस्य भएको तीन बर्ष पुरा हुन लाग्यो ,यस अवधीमा प्रदेश सरकारबाट तपाईको निर्वाचन क्षेत्रमा भएका विकास निमार्णहरु के–के हुन ?
तपाईको प्राथमित्तामा वा तपाईले पहल कदमी लिएको भनेको सडकको लागी मात्र हो, तपाईको निर्वाचन क्षेत्रमा ऐतिहासिक महत्वको सिन्धुलीगढी पनि छ यसको विकासको लागी के गर्नु भयो ?
जिल्लामा निर्माण भई रहेको आइसोलेसन भवन निमार्णको सवालमा बाहिर चर्चामा आएको जस्तो अवस्था हो ?
अब पार्टीको बिषयमा कुरा गरौँ , तपाईले प्रतिनिधित्व गरी रहनु भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरुले पार्टी एकता भयो तर कार्यकर्ता एकता भएन भन्ने गुनासो गरी रहेका छन नी ?
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार अहिले नेपालमा तीन तहका सरकार छन,यी सरकार विच कुनै पनि विकास निर्माणमा तालमेल भएको देखिदैन नी ?